နိုးလော့! | ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၇
ဖတ်လို ကိုရီးယား ချက် ဂရိ ဂျာမန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား ဆက်ဆွာနာ ဆွာဟီလီ တဂါးလော့ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် ပိုလန် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အင်္ဂလိပ် အီတလီ အေးဝေး
▪ “တစ်နေကုန် ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်း၊ မိသားစုများ အတူတူမစားသောက်ခြင်းနှင့် အရှေ့ဘက်ကိုသာ မျက်နှာမူသည့် ကလေးလက်တွန်းလှည်းများ” သည် သားသမီးနှင့်မိဘဆက်ဆံရေးကို ပျက်စီးစေ၏။ ရလဒ်တစ်ခုမှာ ကလေးများ ကျောင်းစတက်သည့်အခါ၌ စကားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောတတ်သည့်အဆုံးတွင် “ဝုန်းဒိုင်းကြဲကြတော့” သည်။—⁠THE INDEPENDENT သတင်းစာ၊ ဗြိတိန်။
▪ စပိန်တွင် ကလေး ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် လက်မထပ်ထားသောမိဘများမှ မွေးဖွားလာကြပြီး ပြင်သစ်တွင် ၄၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဒိန်းမတ်တွင် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဆွီဒင်တွင် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။—⁠INSTITUTO DE POLÍTICA FAMILIAR စပိန်။
▪ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားသုံးပုံတစ်ပုံ၏ အိပ်ချိန်သည် တစ်ညလျှင် ငါးနာရီပင်မပြည့်သဖြင့် “အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းလာခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်အားနည်းလာခြင်း [နှင့်] စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်ခြင်းတို့ကို ခံစားနေရကြသည်။” အိပ်ရေးမဝခြင်းက “အဝလွန်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ လင်မယားကွာရှင်းမှုနှင့် ပြင်းထန်သောယာဉ်တိုက်မှုများ” ကိုလည်း ပိုဖြစ်စေနိုင်သည်။—⁠THE INDEPENDENT သတင်းစာ၊ ဗြိတိန်။
“ရိုက်နှက်မှု၊ အရှက်ခွဲမှုတို့ကို လူငယ်များပြုကျင့်ကြကာ ယင်းတို့ကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများဖြင့် ရိုက်ကူးထားမှုမှာ တိုးများလာနေသည်” ဟုစပိန်သတင်းစာ El País ကဆို၏။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရိုက်နှက်ခံရသူအချို့မှာ ပြန်နာလန်မထူနိုင်တော့ချေ။ ဤပြစ်မှုများကို လူငယ်များ အဘယ်ကြောင့် ကျူးလွန်ကြသနည်း။ “ခိုးယူလိုသောကြောင့်၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကြောင့် သို့မဟုတ် လူဆိုးဂိုဏ်းဝင်ထားခြင်းကြောင့်မဟုတ်ချေ။ ချောက်ချားဖွယ်အသစ်အဆန်းများဖြင့် အပျင်းပြေလို၍ ထိုသို့ပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်” ဟု XL မဂ္ဂဇင်းက ဖော်ပြသည်။ “တစ်ခါတစ်ရံတွင် သူတို့သည် အရက်မူးနေကြပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ မမူးကြချေ။ ယင်းသို့ဖြစ်ရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ သနားကြင်နာမှု ကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်” ဟု ပြစ်မှုဗေဒအထူးပြု စိတ်ပညာရှင် ဗီသန်တာဂါရီဒိုကပြောသည်။
ဆေးသုတေသနသည် အပူပိုင်းဒေသရောဂါအများစုကို လျစ်လျူရှုထားကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဒန်ဒီတက္ကသိုလ်မှ မော်လီကျူးဇီဝဗေဒပညာရှင် မိုက်ကယ်ဖာဂူဆန်က ဤသို့ဆိုသည်– “ဝမ်းနည်းစရာမှာ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် [ကုထုံးသစ်များ]ကို မရှာဖွေကြတော့ခြင်းဖြစ်သည်။” သူတို့၏ ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ကာမိနိုင်ခြေမရှိသောကြောင့် ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရန် ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများအတွက် မက်လုံးမရှိချေ။ ဤကုမ္ပဏီများသည် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ အဝလွန်ရောဂါနှင့် ပန်းသေရောဂါများအတွက် အကျိုးအမြတ်များများရနိုင်သည့် ဆေးဝါးများကိုသာ ထုတ်လုပ်လိုကြသည်။ ခန့်မှန်းခြေအရ လက်ရှိအခြေအနေတွင်မူ “ထိရောက်၍ စိတ်ချရသည့် ကုထုံးများမရှိသေးသောကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် နှစ်စဉ်လူ ၁ သန်းသည် ငှက်ဖျားရောဂါဖြင့် သေဆုံးနေရသည်” ဟု New Scientist မဂ္ဂဇင်းကဆို၏။
အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့ရှိ လာစာပီယင်စာ တက္ကသိုလ်မှသတင်းအရ အသက်သုံးနှစ်အရွယ်ကလေးများသည် ဈေးမှ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကို ခွဲခြားနိုင်ပြီး အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ်သို့ရောက်သော် “သုံးစွဲသူ” လေးများဖြစ်လာကြပြီဟု ဆိုသည်။ တီဗွီကြော်ငြာများသည် သူတို့၏အသက်တာတွင် အဓိကဖြစ်လာပြီး ယင်းကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာသော ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ပေးရန် မိဘများအား အတင်းပူဆာသည့် “အာဏာရှင်” လေးများဖြစ်လာကြသည်ဟု La Repubblica သတင်းစာက ဆိုသည်။ သတင်းစာအဆိုအရ ဖြစ်ပေါ်လာသောအန္တရာယ်မှာ ကလေးများသည် “စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတွင် နေထိုင်ကြရပြီး ကြော်ငြာသမျှသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ရာဟု ယုံကြည်လျက်ရှိ၏။”
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများသည် အစဉ်အလာအရ သက်ရှိမွေးလူနာများဖြင့် လေ့လာသင်ယူကြသည်။ သို့သော် ယခုအခါတွင် နိုဝယ်လ်ဟုအမည်ပေးထားသည့် “စက်ရုပ် မွေးလူနာအတုမှာ လူကြိုက်များနေပြီ” ဟုအေပီသတင်းတစ်ပုဒ်က ဖော်ပြ၏။ “ကိုယ်ဝန်ဆောင်” လူရုပ်တွင် သွေးခုန်ခြင်း၊ သားအိမ်ဝပွင့်ခြင်းတို့ကို သဘာဝကျကျ ထည့်သွင်းထားပြီး သားဖွားမြန်စေခြင်း၊ မွေးဖွားချိန်ကိုဆွဲထားခြင်းနှင့် ခက်ခက်ခဲခဲသားဖွားရခြင်းတို့ကိုလည်း ပုံစံပြုထည့်သွင်းထားသည်။ နိုဝယ်လ်မွေးဖွားလိုက်သော “ကလေး” သည် ကျန်းမာသော နီတာရဲလေးဖြစ်နိုင်ပြီး အောက်စီဂျင်အလုံအလောက်မရ၍ ပြာနှမ်းနေသောကလေးလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့် လူရုပ်ကိုအသုံးပြု၍ လေ့လာသင်ယူရသနည်း။ “သက်ရှိမွေး လူနာကို မှားယွင်းကုသမိသည်ထက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀ တန်စက်ရုပ်ကို မှားယွင်းကုသမိသည်က ပိုကောင်းသည်” ဟုသတင်းကဖော်ပြသည်။
ချာ့ခ်ျများ အဘယ်သို့ ဦးတည်နေသနည်း
ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ အနာဂတ် မည်သို့ရှိသနည်း
သမ္မာကျမ်းစာ​ရှုထောင့် စာတန်ကား မည်သူနည်း။ သူသည် တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လော
မီးတောင်မြုံ၏ အန္တရာယ်အရိပ်အောက်တွင် နေထိုင်ခြင်း
လိင်တူမေထုန် ဒါကို ငါဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ နိုးလော့! ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၇
နိုးလော့! ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၇